Display နှစ်ခုပါဝင်ပြီး ဘက်ထရီနဲ့ ရက် ၃၀ ကြာသုံးနိုင်တဲ့ ဒေါ်လာ ၂၅၀ တန် စမတ်နာရီ
အမှတ်တမဲ့ကြည့်ရင်တော့ TicWatch Pro ဟာ အခြား အမျိုးသားဝတ် စမတ်နာရီတွေနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေချာကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီစမတ်နာရီမှာ တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့ feature တစ်ခုကို သတိထားမိမှာပါ။ အဲ့ဒါကတော့ TicWatch Pro မှာ display နှစ်ခု ပါဝင်လာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ display တွေကို မတူညီတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးနဲ့ သုံးနိုင်သလို နာရီကို မတူညီတဲ့ mode နှစ်ခုနဲ့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘက်ထရီနဲ့လည်း ရက် ၃၀ ကြာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
TicWatch Pro ကို Google နဲ့ Volkswagen Group China တို့လို ကုမ္ပဏီတွေက ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီ Mobvoi က ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၂၅၀ ဖြစ်ပြီး Amazon ကနေ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
TicWatch Pro မှာ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်သလဲဆိုတာကို ဆက်ကြည့်ကြရအောင်….
TicWatch Pro မှာ Google ရဲ့ စမတ်နာရီ operating system ဖြစ်တဲ့ Wear OS ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် Google Play Store က app တွေကို download လုပ်နိုင်သလို messaging, email, ride-hailing စတဲ့ အခြေခံ စမတ်နာရီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
TicWatch Pro မှာ ရေအနက် ၁.၅ မီတာအထိ ဝတ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ရေစိုခံစနစ်၊ built-in GPS နဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်း စောင့်ကြည့်စနစ်တွေလို လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ ပါဝင်ပါတယ်။
TicWatch Pro ကို ရေထဲမှာ မိနစ် ၃၀ ပဲ စိမ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေကူးရင်းဝတ်ဆင်ဖို့ မသင့်ပါဘူး။
TicWatch Pro ကို music streaming နဲ့ NFC ငွေပေးချေမှုအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နာရီကိုသုံးပြီး Google Pay နဲ့ ဝယ်ယူမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
TicWatch Pro ရဲ့ အခြား စမတ်နာရီတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ကတော့ display နှစ်ခု ပါဝင်လာတဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနာရီမှာ OLED display တစ်ခုကို အပေါ်ကနေ အလွှာထပ်ထားတဲ့ LCD display တစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီ display နှစ်ခုဟာ Smart Mode နဲ့ Essential Mode ဆိုပြီး မတူညီတဲ့ mode နှစ်ခုအကြား ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နာရီကို Smart Mode နဲ့သုံးတဲ့အခါ OLED display ကို အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Smart Mode မှာ Wear OS feature အားလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် ဘက်ထရီကိုတော့ နှစ်ရက်ခန့်ပဲ သုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Essential Mode နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာတော့ OLED display ရဲ့အပေါ်မှာ အလွှာထပ်ထားတဲ့ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ LCD display ကို အသုံးပြုပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ အချိန်၊ ရက်စွဲ၊ ခြေလှမ်းအရေအတွက်နဲ့ heart rate monitor ကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘက်ထရီကိုလည်း ရက် ၃၀ ကြာ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဘက်ထရီအားနည်းနေတဲ့အခါမှာ Essential Mode ကို အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲဖို့ သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် နာရီပေါ်က ခလုတ်တွေကိုသုံးပြီး mode နှစ်ခုအကြား ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
TicWatch Pro ရဲ့တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၂၅၀ ဖြစ်ပြီး Amazon ကနေ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ (ဇူလိုင် ၁၀ ရက်အထိ) TicWatch Pro စမတ်နာရီတွေကို Amazon က လက်ကျန်မရှိအောင် ရောင်းချခဲ့ရပြီး မကြာခင်မှာ စတော့တွေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမှတျတမဲ့ကွညျ့ရငျတော့ TicWatch Pro ဟာ အခွား အမြိုးသားဝတျ စမတျနာရီတှနေဲ့ ဆငျတူပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သခြောကွညျ့မယျ ဆိုရငျတော့ ဒီစမတျနာရီမှာ တီထှငျဆနျးသဈတဲ့ feature တဈခုကို သတိထားမိမှာပါ။ အဲ့ဒါကတော့ TicWatch Pro မှာ display နှဈခု ပါဝငျလာခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီ display တှကေို မတူညီတဲ့ ရညျရှယျခကျြနှဈမြိုးနဲ့ သုံးနိုငျသလို နာရီကို မတူညီတဲ့ mode နှဈခုနဲ့ ပွောငျးလဲအသုံးပွုနိုငျစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဘကျထရီနဲ့လညျး ရကျ ၃၀ ကွာ အသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
TicWatch Pro ကို Google နဲ့ Volkswagen Group China တို့လို ကုမ်ပဏီတှကေ ငှကွေေးထောကျပံ့ပေးထားတဲ့ တရုတျနညျးပညာကုမ်ပဏီ Mobvoi က ထုတျလုပျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ တနျဖိုးက ဒျေါလာ ၂၅၀ ဖွဈပွီး Amazon ကနေ ဝယျယူနိုငျပါတယျ။
TicWatch Pro မှာ ဘယျလိုလုပျဆောငျခကျြတှေ ပါဝငျသလဲဆိုတာကို ဆကျကွညျ့ကွရအောငျ….
TicWatch Pro မှာ Google ရဲ့ စမတျနာရီ operating system ဖွဈတဲ့ Wear OS ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ Google Play Store က app တှကေို download လုပျနိုငျသလို messaging, email, ride-hailing စတဲ့ အခွခေံ စမတျနာရီလုပျဆောငျခကျြတှကေို ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
TicWatch Pro မှာ ရအေနကျ ၁.၅ မီတာအထိ ဝတျဆငျအသုံးပွုနိုငျတဲ့ ရစေိုခံစနဈ၊ built-in GPS နဲ့ နှလုံးခုနျနှုနျး စောငျ့ကွညျ့စနဈတှလေို လုပျဆောငျခကျြအခြို့ ပါဝငျပါတယျ။
TicWatch Pro ကို ရထေဲမှာ မိနဈ ၃၀ ပဲ စိမျနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရကေူးရငျးဝတျဆငျဖို့ မသငျ့ပါဘူး။
TicWatch Pro ကို music streaming နဲ့ NFC ငှပေေးခမြှေုအတှကျလညျး သုံးနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နာရီကိုသုံးပွီး Google Pay နဲ့ ဝယျယူမှုတှပွေုလုပျနိုငျပါတယျ။
TicWatch Pro ရဲ့ အခွား စမတျနာရီတှနေဲ့မတူတဲ့အခကျြကတော့ display နှဈခု ပါဝငျလာတဲ့အခကျြ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနာရီမှာ OLED display တဈခုကို အပျေါကနေ အလှာထပျထားတဲ့ LCD display တဈခု ပါဝငျပါတယျ။
ဒီ display နှဈခုဟာ Smart Mode နဲ့ Essential Mode ဆိုပွီး မတူညီတဲ့ mode နှဈခုအကွား ပွောငျးလဲအသုံးပွုနိုငျစမှော ဖွဈပါတယျ။ နာရီကို Smart Mode နဲ့သုံးတဲ့အခါ OLED display ကို အသုံးပွုမှာ ဖွဈပါတယျ။ Smart Mode မှာ Wear OS feature အားလုံးကို အသုံးပွုနိုငျပမေယျ့ ဘကျထရီကိုတော့ နှဈရကျခနျ့ပဲ သုံးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
Essential Mode နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာတော့ OLED display ရဲ့အပျေါမှာ အလှာထပျထားတဲ့ ဖောကျထှငျးမွငျနိုငျတဲ့ LCD display ကို အသုံးပွုပါတယျ။ အဲ့ဒီအခါ အခြိနျ၊ ရကျစှဲ၊ ခွလှေမျးအရအေတှကျနဲ့ heart rate monitor ကို မွငျတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။
ဘကျထရီကိုလညျး ရကျ ၃၀ ကွာ အသုံးပွုနိုငျပါလိမျ့မယျ။
ဘကျထရီအားနညျးနတေဲ့အခါမှာ Essential Mode ကို အလိုအလြောကျပွောငျးလဲဖို့ သတျမှတျထားနိုငျပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ နာရီပျေါက ခလုတျတှကေိုသုံးပွီး mode နှဈခုအကွား ပွောငျးလဲအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
TicWatch Pro ရဲ့တနျဖိုးက ဒျေါလာ ၂၅၀ ဖွဈပွီး Amazon ကနေ ဝယျယူနိုငျပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ (ဇူလိုငျ ၁၀ ရကျအထိ) TicWatch Pro စမတျနာရီတှကေို Amazon က လကျကနျြမရှိအောငျ ရောငျးခခြဲ့ရပွီး မကွာခငျမှာ စတော့တှကေို ပွနျလညျဖွညျ့တငျးသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။